बिरामी बहिनिलाई घरबेटीले गर्यो यस्तो घिनलाग्दो काम ! अब मानवता हराएकै हो त ? (हेर्नुस् भिडियो) – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /भिडियो/बिरामी बहिनिलाई घरबेटीले गर्यो यस्तो घिनलाग्दो काम ! अब मानवता हराएकै हो त ? (हेर्नुस् भिडियो)
5,322 1 minute read
सिन्धुपाल्चोक घर भई हाल काठमाडौँ भक्तपुर बस्दै आएकी कल्पना तामाङ भर्खर १८ वर्ष पुगिन् । १८ वर्षको कलिलो उमेरमा उनका दुवै मृगौलाले काम नलाग्ने भएको छ । दुवै मृगौला फेल भएको रिपोर्ट आएपछि उपचार खर्च अभावका कारण उनको उपचारमा झन् जटिलता थपिएको छ । करिब ३ वर्ष देखि उनले दुवै मृगौलाले काम नगर्ने भन्ने डाक्टरबाट थाहा पाएपछि अब मृगौला प्रत्यारोपण गर्नु पर्ने भएको छ ।
डाक्टरका अनुसार मृगौला प्रत्यारोपण गर्न १५ देखि २० लाख लाग्ने तर कम्जोर आर्थिक अवस्थाका कारण यत्रो रकम दिन नसक्ने कल्पनाका परिवार र स्वयम् कल्पनाले बताएकी छिन् । बहिनिको उपचारमा दिन रात लागि परेकी कल्पनाकी दिदीको अवस्था निकै दयनीय छ । बहिनिको उपचारको लागि खटिएकी उनकी दिदीमाथी अर्को बज्रपात आइपरेको छ ।
भाडामा बस्दै आएकी उनलाई घर धनिले घरबाट निकालेका छन् । बहिनीको डाईलेसीस गर्ने क्रममा खर्च नहुँदा घरबेटीको भाडा तिर्न नसकेको भन्दै उनको आँखाबाट आँशु रोकिएन । पहिला सधै भाडा तिर्दै आएकी उनको कोठामा ताला समेत लागेको थियो । हेर्नुस् यो हृदयस्पर्सी कुराकानी भिडियोमा :
कमला घिमिरे बनिन- करोडौंकी मालिक्नी ( भिडियो सहित ) !